फागुन २९ गते विवाह बन्धनमा बाधिन लागेकी आँचल शर्माको विवाह निमन्त्रणा कार्ड कति महङ्गो ? - Sidha News
फागुन २९ गते विवाह बन्धनमा बाधिन लागेकी आँचल शर्माको विवाह निमन्त्रणा कार्ड कति महङ्गो ?
काठमाडौं । अभिनेत्री आँचल शर्मा यही फागुन २९ गते विवाह बन्धनमा बाँधिँदै छिन् । उनले फागुन २५ गते सङ्गीत, २९ गते वैवाहिक कार्यक्रम र चैत १ गते रिसेप्सन पार्टीको आयोजना गरेकी छिन् । आँचलले आफन्त, चलचित्र कर्मी, पत्रकारलगायतलाई विवाह, सङ्गीत र रिसेप्सन पार्टीका लागि निमन्त्रण कार्ड दिइरहेकी छन् । उनले विवाहमा चलचित्रकर्मी, पत्रकार र आफ न्त सबैलाई बोलाउँदै छिन् । यति बेला आँचललाई विवाहको रौनकले छोपेको छ । केही समय यता प्रेममा रहेकी आँचल प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै छिन् ।